अत्यमा करण चम्किए पछी यसरी भयो क्यानडा माथी नेपालको रोमाञ्चक जित … – पुरा पढ्नुहोस्……
अत्यमा करण चम्किए पछी यसरी भयो क्यानडा माथी नेपालको रोमाञ्चक जित …
काठमाडौं । रोमान्चक खेलमा क्यानडालाई हराउँदै नेपाल नामिबियामा जारी आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन टु को फाइनलमा पुगेको छ । बुधबार भएको लिग चरणको अन्तिम खेलमा क्यानडालाई १ विकेटले पराजित गर्दै नेपालले फाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो ।
विन्डहुकस्थित वान्डरर्स क्रिकेट मैदानमा क्यानडाले दिएको १९५ रनको लक्ष्य नेपालले अन्तिम बलमा ९ विकेट गुमाएर पुरा गर्यो । खराब सुरुवात गरेको नेपालको जितमा करण केसी नायक बने । हारको नजिक पुगेको अवस्थामा करणले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै अविजित ४२ रन बनाएर नेपाललाई उपाधि नजिक पुराए । नवौं नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका करणले ३१ बलमा ३ चौका र ४ छक्का प्रहार गर्दै नेपाललाई महत्वपूर्ण जित दिलाए । करणले सन्दिपसँग मिलेर ५१ रनको साझेदारी गरे । सन्दिप ५ रनमा अविजित रहे ।
करण क्यानडाविरुद्धको खेलमा दोस्रो पटक नायक बनेका हुन् । सन् २०१५ मा नामिबियामै भएको डिभिजन टु मा नेपालले क्यानडालाई ७ विकेटले पराजित गर्दै पनि करण नायक बनेका थिए । त्यसबेला करणको बलिङ्ग चलेको थियो । करणले १० ओभर बलिङ गर्दै २ मेडन राखेर २६ रन खर्चेर ५ विकेट लिएपनि क्यानडा नेपालसँग पराजित भएको थियो । आजको खेलमा भने करणले बलिङतर्फ ८ ओभरमा ४० रन दिएर १ विकेट लिन सफल भए ।
यस्तै नेपालका लागि दिलिप नाथले ४१ रन जोड्दा रोहित पौडेलले २७ तथा आरिफ शेखले २६ रन जोडे । कप्तान पारस खड्का सुन्य रनमा आउट हुँदा उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले ९ तथा सोमपाल कामीले ७ रन जोडे । क्यानडाका लागि सिसिल परभेजले ३ तथा निखिल दत्त र साद बिन जाफरले समान २ – २ विकेट लिए ।
यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको क्यानडाले निर्धारित ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १९४ रन बनाएको थियो । क्यानडाका विजारन्ते श्रीमान्थाले शतकीय पारी खेलेपछि क्यानाडाले उच्च स्कोर बनाएको थियो । अविजित रहेका श्रीमान्थाले १५२ बलमा ८ चौकासहित १०३ रन बनाए।
यस्तै क्यानडाका हाम्जा तारिकले २४, सत्सिम रञ्जित धिन्ड्सले १८ र साद बिन जाफरले १० रन बनाए । नेपालका लागि बसन्त रेग्मीले ३ विकेट लिए । त्यस्तै, नेपालका सन्दीप लामिछानेले २ तथा करणसँगै शरद भेषवाकरले समान १–१ विकेट लिए ।
यो जितसँगै नेपाल ५ खेलमा ४ जितसहित ८ अंक जोडेर शिर्ष स्थानमा रहदै डिभिजन टुको फाइनलमा पुगेको हो । डिभिजन टु मा नेपालको यो सबैभदा राम्रो स्थान हो । तीनबर्षअघि नेपाल चौथो स्थानमा रहेको थियो । अब नेपालले बिहिबार हुने फाइनलमा युएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने छ ।
युएई अन्तिम खेलमा नामिबियालाई १९ रनले हराउदै ६ अंक जोडेर दोस्रो स्थानमा रहदै फाइनलमा नेपालसँगको भेट पक्का गरेको हो । क्यानडा र नामिबियासँग समान ६ – ६ अंक जोडेपनि युएई नेट रन रेटमा अघि रहदै फाइनलमा पुगेको हो । क्यानडा तेस्रो र नामिबिया चौथो हुँदै डिभिजन टु मै रहेका छन् । पुछारको दुई टोली ओमान र केन्या भने डिभिजन – ३ मा घटुवा भएका छन् ।
योसँगै नेपालले सन् २०१९ को लागि आगामी मार्चमा जिम्बाबेमा हुने एकदिवसीय विश्वकप छनोटको लागि स्थान बनाएको छ । नेपालसँगै युएईले पनि विश्वकप छनोटमा स्थान पक्का गरेको छ ।
आगामी मार्च १ तारिखदेखि २५ मार्चसम्म हुने विश्वकप छनोटमा टेष्ट राष्ट्र वेष्ट इण्डिजसँगै आयरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड पपुवा न्युगिनी, अफगानिस्तान, टेष्ट राष्ट्र जिम्बाब्वे, स्कटल्याण्ड र हङकङ रहेको छ ।
छनोटको समूह ए मा टेष्ट राष्ट्र वेष्ट इण्डिजसँगै आयरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड पपुवा न्युगिनी रहेका छन् । समूह वि मा आयोजक जिम्बाबे, अफगानिस्तान, स्कटल्याण्ड र हङकङ रहेका छन् । अब छनोटमा डिभिजन टु बिजेता समूह ए मा रहने छ भने उपविजेता समूह बि मा रहने छ ।
Prevकसैले भन्छन् प्रेम बानियाँ अमेरिकाको पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल हाल्दै होला तर वास्तवमा यस्तो छ भित्री कहानी (भिडियो सहित हेर्नुहोस्)
Nextअन्तिम खेलमा नेपालले जित निकालेपछी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गरे एस्तो घोसणा … बिस्तृत हेर्नुहोस
उनीहरु घर आए, तर मृत…
आजको राशिफलः- बि.स. २०७५ साल मंसिर १८ गते मंगलबार इश्वी सन् २०१८ डिसेम्बर ४ तारीख ,हैरानुहो तपाँईको भाग्यफल!
अशोक दर्जीको घर अवोलाकन गरेर नायक सबिन श्रेष्ठले के भने त ? (भिडियो सहित ) हेर्नूहोस